जब निर्दोष व्यक्तिलाई युट्युबरले अपराधी ठहर्‍याए ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
झापाको दमक घर भएका नेत्र कार्की आफ्नी जेठी पत्नीतिरको परिवारलाई दमकमै छोडेर सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका–१ उम्लिङमा अलैँची खेती गरिरहेका छन् । कान्छी पत्नीसँग उम्लिङमा खेती किसानी गरिरहेका नेत्रलाई युटुबरहरूले एकाएक अपराधी ठहराई आफ्नो युट्युब थमनेलमा फोटो राखेर नै सार्वजनिक गरेका थिए ।
युटुबर नै प्रहरीभन्दा ठुलो अनुसन्धानकर्ता बनेपछि नेत्रका दुवै घरमा रुवाबासी चल्यो । पाँच वर्षअघि उम्लिङबाट दमक बसाइँ सरेर आएका नेत्रको परिवार यो घटनामा मुछिएको छैन । एकै परिवारका ६ जनाको हत्या गर्न अर्को सिङ्गो परिवार नै लागेको भए पनि नेत्र यस घटनाबाट टाढा छन् ।
गत भदौ २१ गते बौद्धमान कार्कीका छोरा ५५ वर्षीय तेजकुमार कार्कीसहित बौद्धमानकी पत्नी ८४ वर्षीया पार्वता कार्की, तेजकुमारकी पत्नी ५४ वर्षीया मनमाया कार्की, तेजकुमारकी बुहारी ३२ वर्षीया रञ्जना कार्की, आठ वर्षीय नाति दीपेन कार्की र पाँच वर्षीया नातिनी गोमा कार्कीको बीभत्स हत्या भएको थियो ।
हत्यामा संलग्न ४७ वर्षीय खड्गबहादुर, उनका छोरा २८ वर्षीय हस्तबहादुर र ४९ वर्षीय रणबहादुर कार्की तथा उनका छोराहरू २५ वर्षीय लोकबहादुर साथै १७ वर्षीय नरेश कार्की पक्राउ परिसकेका छन् । अरू केहीलाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको भए पनि अभियुक्तको टुङ्गो लागिसकेका कारण उनीहरू छुटिसकेका छन् । प्रहरीले उनीहरूको पहिचान गोप्य राखेर अनुसन्धान गरे पाँच जनाबाहेक अरूलाई छोडिसकेको छ ।
सङ्खुवासभामा भएको सामूहिक हत्याकाण्डमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेर असोज ४ गते सोमबार सार्वजनिक गरेका थप ४ अभियुक्तहरू ।
तथापि, घटनाको अनुसन्धानमा अहिले पनि घटनास्थलमा इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरबाट असईको नेतृत्वमा नौ जना प्रहरीको टोली खटिइरहेका छन् । प्रहरी आफ्नो काममा जुटिरहँदा गाउँले पनि सामान्य जीवनयापनतर्फ फर्किने तयारीमा छन् । तर उनीहरूलाई युटुबरहरूले बसिखान दिएका छैनन् । केही स्थानीय र केही झापा,मोरङ, सुनसरीलगायत जिल्लाबाट सङ्खुवासभा पुगेका युटुबरहरूले घटनालाई विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले घटनासँग सम्बन्ध नै नरहेका व्यक्तिहरूको फोटो राख्दै पक्राउ परेको, घटनामा थप ट्वीस्ट आएको भन्दै दिनानुदिन भिडियो सार्वजनिक गर्ने क्रम बढेकोले गाउँमा थप त्रास फैलिएको स्थानीय बताउँछन् ।
सामूहिक हत्या भएको स्थान (माथि) र उक्त घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको तस्बिर।
यस्तैमा, गत हत्याकाण्डमा नेत्रको संलग्नता रहेको भन्दै युटुबरले उनको फोटोसहितको पोस्ट गरेका थिए । जबकि, उनी अनुसन्धानमा तानिएकै थिएनन् । प्रहरीले पटक–पटक अनुसन्धानका लागि गाउँले पक्रेर लैजाँदासमेत उनी त्यसमा परेका थिएनन् । ‘युट्युबमा दाइ (नेत्र)को फोटो बाहिरिएसँगै घरमा सबै आत्तिए’, नातामा नेत्रका भाइ पर्ने विनोद कार्की भन्छन्, ‘दाइ उम्लिङमा अलैँची खेती गर्दै हुनुहुन्थ्यो । युट्युबमा पक्राउ परेको फोटोसहितको भिडियो आएपछि आत्तियौँ । फोन गर्दा दाइले आफू पक्राउ नपरेको जनाउनुभयो ।’
यस्तै प्रकारको युटुबरको सिकार बने मृतकका बुबा ९१ वर्षीय बौद्धबहादुर कार्की । उनलाई पनि हत्यामा संलग्न रहेको आशङ्कामा प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाउँदै ‘नेपाली खबर’, ‘अनलाइन न्युज नेपाल’ लगायत च्यानलबाट भिडियो प्रसारण भएको थियो । उक्त भिडियोपछि गाउँलेहरू थप आतङ्कित भएका छन् ।
‘बिचरा आफ्ना साखा सन्तान मासिँदा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर किन लैजान्थ्यो ?’, विनोद भन्छन्, ‘युट्युबेले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा बाधा अड्चन लगाएका थिए । अहिले निर्दोष मान्छेको तस्बिर राखेर मर्नु न बाँच्नु बनाउँदै छन् । घटनाको छिनोफानोको लागि प्रहरीलाई जिम्मा दिएर उनीहरूबाटै आधिकारिक सूचना बटुल्नुपर्ने दायित्व बोकेका युटुबर कहिले सुध्रन्छन् ?
यता, युटुबरको नियामक संस्था अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घका महासचिव पवन फुयाँल पछिल्लो समय युटुबरहरू भ्रामक तरिकाले प्रस्तुत हुनेगरेपनि नियम–नीति प्रस्ट नहुँदा उनीहरूलाई कारबाही गर्न नसकेको बताउँछन् । केही युटुबरलाई व्यक्तिगत पहिचानका आधारमा फोन गरेर चेतावनी दिए पनि सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
प्रेस काउन्सिलमा कारबाहीका लागि सुझाव दिँदा पनि पत्रकारिताको आचारसंहिताभन्दा बाहिर गएर भ्रामक सूचना फैलाउने बाटोमा गएका युटुबरको सङ्ख्या धेरै भएका कारण कारबाही हुन नसकेको फुयाँल बताउँछन् ।
‘कारबाहीका लागि अपिल गरेपछि च्याउसरि खुलेका च्यानललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘एक त युटुबरलाई नियमन गर्न खास पद्धति नभएका कारण पनि गाह्रो भइरहेको अवस्था छ । हामी युटुबरको ज्यादती रोक्न लागिपरिरहेका छौँ ।’
सामान्य अवस्थामा फर्किने प्रयत्न
गाउँमा ६ जनाको नरसंहार भएपछि आतङ्कित गाउँले अब सामान्य जीवनयापनमा फर्किने प्रयासमा छन् । केही प्रहरीले गाउँमै बसेर घटनाको अनुसन्धान गरिरहे पनि चाडबाड नजिकिँदै गरेको अवस्थामा गाउँले सामान्य अवस्थामा फर्किने प्रयत्नमा रहेको मादी नगरपालिकाका प्रमुख विदूरकुमार लिंथेपले बताए ।
अहिले अवस्था सामान्य भइसकेको र स्थानीयमा पनि त्रास कम हुँदै गएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अवस्था सामान्य हुँदै गएको छ, स्थानीयलाई त्रास नहोस् भनेर प्रहरीलाई अहिलेसम्म घटनास्थलमा नै राखिएको छ ।’
यस्तै, मादी नगरपालिका–१ उम्लिङ खोलाका वडाध्यक्ष खेमनाथ कटुवालले बिस्तारै अवस्था सामान्य हुँदै गएको बताए । सामूहिक हत्याकाण्डमा ज्यान गुमाएका तेजकुमारको घरमा अहिले सबै परिवार रहेको उनले जानकारी दिए । बौद्धमान, बौद्धमानका छोरा तीन जना (तेजकुमारका दाजुभाइ), तेजकुमारका छोरा दुई जना, बुहारी, नातिनातिना रहेको उनले जानकारी दिए । सुरक्षाको टोली पनि तेजकुमारकै घरमा रहेको उनको भनाइ छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमबार, असोज ११ २०७८ ०६:२०:१९